Mogadishu Journal » 2019 » October » 29
Civil aviation authorities in Kenya have launched investigations into a local airliner which has in the last three weeks suffered two accidents triggering fears among passengers. The Kenya Civil Aviation Authority (KCAA) said in a statement Monday it had opened investigations...
Mjournal :-Wasaaradda Arrimaha gudaha ee Dowlad goboleedka Puntland ayaa waxaa ay soo saartay digniin la xiriirta duufaano iyo roobab is wata oo oo la sheegay inay maalmaha soo socda kusoo wajahan yihiin deegaannada Maamulkaas. Wasaaradda ayaa qoraalo ugu dirtay dadka...
Mjournal :-War kasoo baxay safaarada Mareykanka ee Muqdisho ayaa waxaa looga hadlay fahaatadaha Wabiga Shabeelle uu ka geystay Magaalada Baladweyne iyo daadadka kusoo rogmaday Magaalada Bardaale iyo khasaaraha ka dhashay. Qoraal kasoo baxay Safaarada Mareykanka ee Muqdisho ayaa...
Mjournal :-Madax ka socota dalka Uganda oo booqasho ku joogtay maalmihii la soo dhaafay dalka Soomaaliya ayaa kula waxa ay kula kulmeen deegaanka Carbiska ee gobolka Sh/hoose wiil uu dhalay Madaxweynihii hore ee Uganda Iidi Amiin. Wiilkan la sheegay inuu dhalay Madaxweynihii hore...
Khayre oo xafiiskiisa ku qaabilay safiirka cusub ee Sweden
Mjournal :-Ra’iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya (XFS) Xasan Cali Khayre ayaa maanta xafiiskiisa kula kulmay Danjiraha cusub ee Dowladda Sweden u fadhiya Soomaaliya, Staffan Tillander. Kulanka ayaa looga hadlay xoojinta xariirka soo jireenka ah ee ka dhexeeya labada...
Mjournal :-Shir ku saabsan madasha Arimaha bini’aadanimo ee dalka,isla markaana ay soo qaban qaabisay wasaaradda gargaarka iyo maareeynta musiibooyinka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, ayaa maanta ka furmay magaalada Muqdisho. Shirkaan oo ay ka qeybgaleen guddiga gurmadka...
Haraadiga Meydka Taliyihii booliiska AMISOM oo la helay iyo aas loo sameenayo
Mjournal :-Kooxaha baaritaanada ku sameenayay meydadka dadkii ku dhintay diyaaradii Itoobiyan Airline ee ku bur burtay duleedka magaalada Adis Ababa ayaa helay qeybo kamid ah haraadiga meydka taliyihii booliiska AMISOM ee Soomaaliya ka howlgala. Taliyihii ciidamada Booliiska...
Meydka mid kamid ah dadkii doonta la rogmatay oo la helay
Mjournal :-Wararka laga helayo Magaalada Baladweyne ee Xarunta Gobolka Hiiraan ayaa waxaa ay sheegayaan in guddi loo xilsaaray Baadi goobka dadkii ay doonta la qalibantay shalay ay heleen meydka mid kamid ah dadkii saarnaa doontaas. Wararka ayaa waxaa ay sheegayaan in deegaanka...
Wasiirka arrimaha gudaha dowladda Federaalka iyo hoggaanka Ahlu Sunna oo kulmay
Mjournal :-Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha dowladda Federaalka Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye iyo hoggaanka Sare ee Ahlusunna Waljameeca ayaa xalay kulan ku yeeshay Magaalada Dhuusamareeb. Kulanka ayaa ka dhacay Xarunta Inji oo ay degan yihii hoggaanka Ahlu Sunna iyo Madaxa...
Farmaajo oo sheegay in Beesha Caalamka kala hadlayaan Arrimaha fatahaadaha
Mjournal :-Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo kulan la qaatay Guddiga Qaran ee Gurmadka Fatahaadaha, culimada iyo ganacsatada Soomaaliyeed ayaa ku baaqay in gurmad deg-deg ah loo fidiyo muwaadiniinta ku dhibaataysan fatahaadaha...